Muxuu ka yiri Arthur Melo kaddib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay heshiiska uu ugu biiray Juventus?? – Gool FM
Dajiye June 29, 2020
(Spain) 29 Juun 2020. Xiddiga reer Brazil ee Arthur Melo ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay heshiiska uu ugu biiray kooxda Juventus, kaasoo maanta si rasmi ah loo shaaciyay, waxaana heshiiska ka mid ahaa in Miralem Pjanić uu u wareegay dhanka garoonka Camp Nou.
Labada ciyaaryahan ayaa ku sii sugnaan doono kooxaha Juventus iyo Barcelona ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan 2019/2020, si ay u dhameystiraan olalihii ay soo wadeen tan iyo bilawgii xilli ciyaareedka.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday qoraal uu Arthur Melo ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Twitter, waxaana uu yri:
“Waxaan diiradda saarayaa waqtiga xaadirka ah, waxaan ujeedooyin muhiim ah ku heysanaa Barcelona, waana sii wadi doonaa inaan wax walba siiyo ilaa iyo dhamaadka asxaabteyda iyo taageerayaasha”.
“Waxaan sidoo kale ka mahad celinayaa xiisaha weyn oo ay Juventus ii muujisay, waxaan ku guda jiraa howlaha ah inaan ku biiro koox weyn, caqabado badan ayaa iga sugaya Bianconeri”.
Arthur Melo ayaa ku biiray kooxda Barcelona xagaagii 2018, isagoo kaga soo biiray naadiga reer Brazil ee Gremio, isaga oo ku ciyaaray maaliyada Blaugrana 72 kulan.
RASMI: Juventus oo shaacisay faahfaahinta faa'iidooyinka dhaqaale ee heshiiska Arthur Melo iyo Pjanić